Mety Xfce 4.12 Daty famoahana | Avy amin'ny Linux
Rayonant | | About us
Taloha dia naneho izahay eto inona no tonga Xfce 4.12. Betsaka ny zava-baovao momba ny fampiharana ny tontolo iainana sy ny fikirakirana ny fanaraha-maso marobe.
Volana vitsivitsy lasa izay, lisitr'ireo bibikely mitsikera izay mety nanakana ny famoahana kinova vaovao ary araka ny hita eo dia voavaha ny maro an'isa. Ho fanampin'izany dia efa nisy ihany koa ny famoahana kinova fanamboarana fonosana marobe toa ny xfce4-tontonana, xfce4-power-manager, xfce4-fametrahana, xfce4-taskmanager, xfdesktop, xfwm4, xfce4-session ary koa kinova azo antoka sasany an'ny Thunar ary xfce4-screensooter.
Eny, ny teboka nanomezana anarana izany rehetra izany dia roa andro lasa izay, Simon Steinbeiss (Ampahan'ny tetikasa Shimmer ary miandraikitra ny fanovana farany ao amin'ny fananganana multi-monitor miaraka amin'ny Sean Davis, ny xfce4-task-manager and of xfce4-power-manager miaraka amin'ny Eric Kohel ) nanoratra ao amin'ny Lisitry ny fampandrosoana Xfce ny manaraka:
Ry mpihazona ireo singa fototra
manoratra aminao izahay manolotra daty famoahana mivaingana ho an'ny 4.12 iray volana eo ho eo, ny faran'ny herinandron'ny 28 febroary sy 1 martsa XNUMX. Raha niresaka momba ny satan'ny fizotran'ny singa fototra miaraka amin'ny maro aminareo izahay dia matoky izahay state of Xfce dia ampy tsara handefasana ny sisiny farany ary hanosika fandikan-teny bebe kokoa mandra-pahatongan'izany.
Izay nadika ho an'ireo izay tsy dia mahay miteny anglisy dia ho toy ny:
Ry mpihazona singa lehibe
Manoratra izahay hanolotra daty mivaingana amin'ny famoahana ny [Xfce] 4.12 iray volana eo ho eo manomboka amin'ny faran'ny herinandro 28 febroary sy 1 martsa. matokia fa ny satan'ny Xfce dia ampy handefasana antsipiriany farany ary hampakatra dikanteny hafa mandra-pahatongan'izany.
Ny marimaritra iraisana dia ny fanohanana ny volavolan-dalàna, ao anatin'izany ny fanohanan'ny Nick schermer. Miara-miasa amin'ireo mpandraharaha hafa izahay, ka raha misy famoahana vaovao sy fanamboarana bibikely dia hatao amin'ity volana ity izy ireo, farany, ry tompokolahy Manaova famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Xfce 4.12 amin'ny 1 martsa!
Mazava ho azy, miankina amin'ny anton-javatra maro, io daty io dia azo ovaina saingy ny zava-misy amin'ny fanekena marimaritra iraisana sy ny fametrahana daty voafetra dia manome fanantenana lehibe antsika ary azo antoka fa hitranga ny famotsorana. Ka manantenà ary raha azo atao ny miara-miasa amin'ny fandikan-teny sy ny tatitra momba ny lesoka, ny fampandrosoana ny zava-drehetra dia azo arahana amin'ny lisitry ny fampandrosoana. Matokia fa hanao fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny zava-baovao hoentiny isika rehefa mivoaka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mety Xfce 4.12 Daty famoahana
Vaovao ho an'ny olona maro izany: D. Na izany aza, mijanona miaraka amin'ny Gnome-Shell ao amin'ny CentOS 7 aho satria nilaza ny marina fa efa zatra azy io matetika ary rehefa manandrana tontolo hafa dia mahatonga ahy tsy hamokatra firy ...
Tsy ratsy izany raha manamboatra torolàlana hametrahana CenTOS 7 ianao ary torolàlana manaraka hahafantarana izay tokony hatao aorian'ny fametrahana azy.
Efa misy iray ato amin'ity bilaogy ity.
petercheco, azafady ... fa tsy tokony ho izaho irery no tonga saina hoe "aza very" ny fotoana hitenenanao fa mampiasa "centos" ianao. Na ny fampahalalana ao amin'ny lahatsoratra na ny valinteninao dia samy tsy misy ifandraisany.
PS: raha mba napetrakao fotsiny ... -Mampiasa xfce ao anaty centos- aho, lehilahy tsara! Inona no mitranga amin'ny doka tsy dia henjana!
PS: DEBIAN no ampiasaiko !!!! miaraka amin'i xfce ary manao zavatra tsara aho.
Ary inona no mitranga? Sa sanatria tsy afaka maneho ny hevitro momba izany aho? Tsy bilaogy maimaimpoana ve izany? Angamba tamin'ny fanehoan-kevitra nataoko fa nilaza ianao fa misintona ny CentOS amin'ny Internet ity na izaroa ary manaraka ny torolalana momba ny fomba hanaovana azy, fantatrao ve?
Azafady, zazalahy, toa manelingelina anao izany, mandray anjara amin'ny bilaogy aho… ampahatsiahiviko anao fa mpampiasa XFCE aho ary tiako kokoa noho ny KDE izany.
Mampatsiahy ahy izany, ao anaty forum iray izay tsy holazaiko mba tsy hanaovana doka, dia manao doka foana aho - mamelà ny fihoaram-pefy - distro mifototra amin'ny Arch, ary mbola tsy nahita olona nanelingelina ny "bloat" tamin'i Manjaro aho na Anteriors. Heveriko fa rehefa misy mahita zavatra tiany dia anoroany azy hatraiza hatraiza. Ary tsy amin'ny Linux ihany no mitranga, fa amin'ny sehatra hafa (anime, mobiles, ranomanitra sns) ary tsy hitako ho olana izany. Raha tian'ny zazalahy ny tsara CentOS, raha tsy manonona xfce izy ao amin'ny tantara dia tsy dia manahy ahy izany. Ny olana dia, raha ny filazako, rehefa manomboka misedra bilaogy amin'ny windows izahay, toy ny mahasosotra antsika rehefa manary bibikely eto ny mpankafy windows.
Mialà sasatra ary mihinàna snickers 🙂
Ary izaho koa dia mampiasa an'i Debian Jessie / Wheezy amin'ny XFCE, ary tsy mirehareha firy mpitari-dalana o mpino.
Misy olona tia fizarana "X" satria nanome fahafaham-po azy ireo, raha ny amiko dia Debian. Angamba taty aoriana dia hampirisika ahy hanandrana ny CentOS aho, fa amin'izao fotoana izao, tsy manana fitaovana ampy hanombohana fitsapana amin'ny distro toy ny tamin'ny fotoana nianarako ny mari-pahaizana momba ny informatika sy ny solosaina (izay farafaharatsiny nahavita nahazo ny karatra nahazoako diplaoma, na dia tsy mahazo ny diplaomako aza aho).
Etsy ankilany, efa matotra ny GNOME 3, saingy tsy ampiasaiko izany satria miankina betsaka amin'ny SystemD io ary indrisy fa ity bootloader ity dia nahatonga ahy narary rehefa nahafantatra ny baiko naleoko niverina tany amin'ny SysVinit an'i Debian. Ary momba ny KDE, hiandry ny kinova faha-5 aho mba ho afaka hampiasa azy io, satria na dia mandany horonantsary 96MB (latsaky ny Aero avy amin'ny Windows Vista / 7) dia hita fa tsara kokoa noho ny birao hafa tontolo iainana. Raha manatsara ny antsipiriany sasany toy ny fanaingoana sy ny modularita izy ireo, dia hiverina hampiasa ilay tontolon'ny birao izay nahasarika ahy aho tamin'ny fitsapana ny Mandrake 9.
Andao, raha tianao ny XFCE dia ho tianao bebe kokoa ny MATE (mpankafy GNOME 2 miteny aminao).
Mampiasa Thunar sy screensooter aho ary manantena ireo kinova vaovao. Hiditra aho hijery izay entin'izy ireo indray, raha misy zava-baovao 😀
Havia dia hoy izy:
Raha tsiahiviko, i Thunar dia efa ao amin'ny kinova 4.12 tamin'ny fizarana farany indrindra, tsy maintsy ho hitantsika raha nahazo fanovana maro izy tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Valiny tamin'i Zurdo
Farany hivoaka miaraka amin'ny fijanonana tonga io. Angamba tsy nampoiziko izany, noheveriko fa mbola tsy hita izy io, tamin'ny fotoana farany nahitako ny pejy XFCE dia nahemotra izy ireo tamin'ny fanombohana sy ny fampandrosoana.
Tongava amin'ny pejy hoy hatrany izy ireo fa mbola tsy vonona ary tara io https://wiki.xfce.org/releng/4.12/roadmap
Tsy haiko raha tsy nanavao ny pejy izy ireo na raha zavatra hafa no resahina fa tsy ny famoahana farany ny ersion 4.12
Ny vaovao miresaka ity lahatsoratra ity dia nomena tao amin'ny lisitra Xfce https://mail.xfce.org/pipermail/xfce4-dev/2015-February/031057.html
Efa azoko izany, fa maninona no tsy novan'izy ireo izany pejy izany?
Raha tsy mifandraika loatra ny vaovao momba ny akanjo dia tsy havoaka ao amin'ny faritra vaovao izany.
Fantatrao ve ny dikan'izany ??? 4.14 manomboka ny fampandrosoana !! Andao hojerentsika raha misy ny vintana ary hitantsika izany alohan'ny 2025
Mamaly an'i Rinopopo
Ny tiako hosoratana dia ny: A-fucking-MEN!, Saingy tsy maintsy ho fanehoan-kevitra maharitra izany.
Niezaka nandika samirery ny lahatsoratra anglisy aho mba hahazoako azy. Avy eo hitako ny fandikan-teninao ary hitako fa tena akaiky aho, afa-tsy fehezanteny vitsivitsy izay tsy azoko ny sahan-kevitra. Saingy mbola tena tsara ho an'ny fandikan-teny ... ny zavatra tsara dia mihatsara aho rehefa mandika lahatsoratra sy mampihatra ny toe-javatra 🙂
Mikasika ny vaovao dia heveriko fa hisy horohoron-tany any amin'ny toerana iray manerantany rehefa mivoaka ny xfce 4.12. Zavatra efa nandrasanay hatry ny ela. Ity, miaraka amin'ny LXQt 0.9 sy ny vaovao avy amin'ny Cinnamon, dia betsaka ny zavatra tokony ho voaporofo. Antergos sy Manjaro no ho mpiara-miasa amiko 😀
Xfce dia birao mahafinaritra, antenaina fa nahitsy ny bibikely, fangatahana ... hanala ny totozy amin'ny birao izay napetrakao default.
Eny, tiako ny mamaky ny hevitr'i Petercheco ary nahasoa izy ireo indraindray.
Marina fa namoaka izy, teo amin'ity bilaogy ity, torolàlana hametrahana ny CenTOS ary hanaraka azy io avy eo saingy tsy azoko izany, raha jerena ny toetrako momba ny novizako. Fa araka ny nolazaiko dia tsy izy no diso fa ahy ary tena mihetsika haingana be izy.
xfce no birao ankafiziko indrindra, saingy manome olana ahy amin'ny fitsitsiana angovo an'ny monitor ary amin'izao fotoana izao dia mila mampiasa vady aho, raha misy an'ity kinova vaovao ity no nanitsian'izy ireo izany dia miverina amin'ny xfce ho ahy aho no birao mahomby indrindra , indrindra raha "whisky" sy "toerana" no asiana azy
Eny, XFCE 4.12 dia hitondra ilay xfce4-power-manager 1.5 vaovao XNUMX izay tokony hatsarany ary toa be dia be :).
Eny, tsara. Manantena aho fa hihatsara ireo safidy.
Tiako ny xfce satria hatramin'ny 512 MB dia manidina izy fa ho ahy ny foibe fanaraha-maso dia tokony ho tsara kely kokoa satria na dia manana safidy aza izy io dia tsy manana safidy sasantsasany toy ny "mpampiasa sy vondrona" saingy manantena ny ho tonga amin'ity fanavaozana ity aho
Valio i roberto mejia